PRICE-LIST ho an'ireo zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER"<< Download. pdf. >>
Ny pyrolysis mando dia "FERMER"
Ny tanjon'ny plant pyrolysis "FERMER".
Fametrahana pyrolysis "tantsaha" Klimov Design Birao lasa nanarona ny zavatra ilain'ny tantsaha sy ny orinasa madinika any amin'ny hafanana, lasantsy, solika solika sy ny herinaratra, ary ny tsingerin'ny handevonana ny fako ny ankohonany sy ny fandaniam-poana ny orinasa. Amin 'izany tsy mitsaha-mitombo ny profitability ny entam-barotra vokatra vokarin'ny fampihenana ny vola lany amin'ny famokarana angovo ny. Fametrahana pyrolysis "MPAMBOLY" endrika tokana mamela pererabatyvt izay mety ho fandaniam-poana eo amin'ny ara-batana fanaony; mafy sy rano fako. Rano fako izay mety perererabatyvat hametraka ny: fiara fako menaka, solika menaka, asidra sludge, sludge solika.
Nomenclature ny tariby FERMER araka ny haben'ny fotodrafitrasa fototra.
Ny anaran'ny mpikatroka
Duree du condition
Ny haavon'ny fehezan-teny
3 taonina isan'andro
(code F 1100) 500 мм 1800 мм 0,4 м3 amin'ny sehatra 2
8 taonina isan'andro
(code F 1101) 900 мм 2000 мм 1,3 м3 amin'ny sehatra 2
10 taonina isan'andro
(code F 1102) 900 мм 3000 мм 1,9 м3 amin'ny sehatra 2
25 taonina isan'andro
(code F 1103) 1400 мм 3000 мм 4,6 м3 amin'ny sehatra 2
Sary famantarana ny fametrahana "FERMER".
Fametrahana ny endriky ny fametrahana sy ny fandefasana ny fametrahana "FERMER".
Ny rafitr'ity rafitra FERMER ity dia afaka miasa amin'ny sehatra enina, mifototra amin'ny fomba manokana amin'ny vokatra voalaza ao amin'ny fivoahana:
- 100% ranom-boankazo;
- 50% ranom-boankazo и 50% mamoaka entona;
- 50% mamoaka entona и 50% Char (arina);
- 100% Char (arina);
- 50% Char (arina) и 50% ranom-boankazo.
Ny vata-pandrefesana amin'ny fametrahana dia manana akanjo (tavoahangy) misy rano (solika). Amin'ny famoahana ny 250 kW ny herinaratra, izay manome efitra mafana ao amin'ny 2000 metatra.
Ny fidirana amin'ny mpandoro ny vata-pandrefesana ao amin'ny sokajy pyrolysis dia azo alamina mandritra ny fametrahana azy amin'ny iray amin'ireo toerana telo: eo anoloana, havanana, ankavia.
Ny mpandidy ny enta-mavesatra sy ny famoahana ny sisa tavela amin'ny kokosy dia manana fahalalahana maherin'ny 270 degre raha oharina amin'ny axe vertika. Ny fitarihana ny toerana misy ny entana dia tsy miankina amin'ny fitarihana ny toerana mifandray amin'ny tsirairay. Ireo mpandraharaha dia afaka manova ny toeran'ny toerana eo an-tampony amin'ny 15 ka hatramin'ny 60 degre ambanin'ny elanelana ary manova ny halavany amin'ny fampidirana tsindrona. Ny fako entina hodiovina dia tsy maintsy alaina tsikelikely hatramin'ny 50 mm.
Ireo tombontsoa amin'ny famolavolana ireo dia ahafahana mametraka ny pyrolysis ao amin'ny tranonkalan'ny tsenan'ny mpanjifa, hanangana ny modules ho an'ny dingana teknolojika efa misy. Ho ohatra iray manokana: Iza no efa nividy PROMETHEUS-FARMER ary te hampitombo ny fahaizan'ny mampiasa voly lehibe, ny PROMETHEUS-FERMER dia ampidirina ao amin'ny sehatry ny teknolojia ho toy ny fametrahana ny fanesorana rano avy amin'ny korontana, ny fanodinana volon-driaka maina ao anatin'ireo vata lehibe lehibe,.
Fanolorana Plant Prometheus-MPAMBOLY.
Описание и работа установки пиролиза "ФЕРМЕР".
FITAOVANA FITAOVANA FITAOVANA FAMONJENA PROMETHEUS-FARMER.
DESCRIPTION DE LA PROJECT ET TECHNO-ECONOMIC UNABRIDATION DES PLANTES Pyrolysis modules PROMETHEUS.
PROJECT FARMER sy TECHNO-ECONOMIC FITORIANA hahazoana alika avy amin'ny fako voajanahary.
Complexes POTRAM ho an'ny fanodinana ny kodiarana sy ny entam-barotra amin'ny indostria.
Famerenana ny fako plastika amin'ny komplex PROMETHEUS amin'ny pyrolysis.
Hafakely fako sy fako samihafa.
Ny habetsaky ny ranona pyrolysis azo avy amin'ny fako samihafa.
Коммерческое предложение переработка ТБО в ГСМ и Электроэнергию.
Tolotra ara-barotra amin'ny fanodinana ny fako amin'ny solika sy ny herinaratra.
Tolotra ara-barotra fanomezana siramamy ho an'ny herinaratra sy ny solitany.
Коммерческое предложение переработка иловых отходов очистных сооружений в электроэнергию и удобрения.
Fampandehanana ara-barotra ara-barotra amin'ny alalan'ny solika eo amin'ny solika sy ny angovo.
Ny prototype voalohan'ny fametrahana pyrolysis "FERMER" - fizarana pyrolysis "Tiny".
Fanontaniana mikasika ny fampiharana ny fametrahana "FERMER".
Fanontaniana ho an'ilay mpamorona:
Azo atao ve ny mampihena ny vidin'ny orinasa amin'ny "zero" miaraka amin'ny fanampian'ny orinasa mini-PROMETHEUS-FARMER?
Izany no antony nanaovanay ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Manana tranobe lehibe tsy mahasoa izahay izay mandany herinaratra iray volana isam-bolana mandritra ny vola 1000, anisan'izany ny fandoavam-bola amin'ny fandefasana fako ary amin'ny fotoana ririnina dia ampiana vola $ 800 isam-bolana. Izany no fanirianay hanaisotra ny saram-pitsaboana tsy ilaina. Ny tanjon'izy ireo dia ny hitazona ny hafanana, ny herinaratra ary tsy hisakanana azy, satria ny vokatra ho an'ny rehetra dia manana solika matanjaka tsara ho an'ny fiaranao.
Ahoana no ahazoako vola amin'ny fampiasana ny minisiteran'ny PROMETHEUS-FARMER?
Azo antoka fa misy fomba maro. Ho feoko ny tena tranga izay niditra tao an-dohako: Nantsoin'ny mpamboly iray avy any Litoania aho, nahafantatra izay nataon'i KB, ary tamim-pifaliana no nilaza tamiko hoe: "Igor, miaina ambanin'ny communism aho." Nangataka azy aho mba hilaza aminy izay tiany holazaina rehefa nilaza izy fa "miaina eo ambanin'ny komonisma" izy. Nilaza izy fa vola be fotsiny no tsy misy na aiza na aiza hametrahana azy. Ary nanomboka izany rehetra izany fa izy no iray amin'ireo voalohany nametraka ny tenany tao an-tranony noho ny famokarana gazy entona avy amin'ny fako sy ny fako, nampifandray ireo mpamokatra herinaratra ho an'io. Nanangana tamba-jotra izy, ary ny manan-danja indrindra amin'ny trano fonenana dia 90 isan-jaton'ny vola rehetra, mba handrakofana ny fatran'ny hafanana sy ny herinaratra mba hamoronana fitomboana ho an'ny fitomboan'ny zavamaniry. Avy amin'ilay fiaramanidina fantson-drano nataon'ireo fiara mifono vy, dia nanomboka nidina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ny hafanana, ary nisy hazavana avy amin'ny mpamokatra. Ary dia malalaka ho ahy izany. Nanomboka naniry tsimok'aretina tsotra izy: radiavy, tongolo, salady ary ny sisa. Nafahana ary natolotra ho an'ny toeram-pivarotana. Isan'andro ry zareo dia mandefa vola amin'ny fiaramanidina, nefa tsy mandoa vola aho, fa karama ho an'ny mpiasa ihany. Avy eo dia nanomboka naka vola izy mba handraisana fako avy amin'ny mponina 1 fiara fitaterana - 1 dolara. Vokatr'izany, manana vola be aho fa nividy entana ary mbola mamokatra sambo mpitrandraka maoderina. Ny komonisma dia mitoetra amin'ny hoe ny vola dia tsy mandeha afa-tsy iray ihany: mankany amiko. Samy nandoa vola aho, tsy mandoa vola na inona na inona..
Fitaovana manokana ho an'ny tanana isika ho fanesorana ny fako ao an-tanana mankany amin'ny fametrahana vilany iray. Tsy voatery hisalasala momba ny fitaovam-pambolena isika, ampy ho 100 taona izany, mbola mbola mandoa izany isika. Manana ny fitaovam-pitaterana milanja sy ny mpiasa an-tsokosoko manokana isika, moa ve isika afaka manamboatra ny fitaovantsika araka ny sary nataonareo ho an'ny filanareo manokana? Eo ambanin'ny fanaraha-maso, fanatsarana sy fampiofanana. Tena mamporisika ny hampihenana ny vola lany amin'ny orinasa ianao amin'ny fampitsaharana ny fandaniana amin'ny hafanana, ny herinaratra ary ny fividianana gazy sy ny loto.
Inona avy ireo tahiry amin'ny fampiasana ny orinasa Fermer?
Tsy ho hendry aho, hanome endrika fanadihadiana tsotra fotsiny aho. Ny kisary marina dia manao izany ary tsy miady hevitra amiko, tsy miraharaha ny fampahalalana azonao avy aminao amin'ny taratasy. Nanangana "FERMER" izahay amin'ny fomba amam-panaovana fanodinana 5 taonina. Tamin'ny famoahana ny tondra-drano 1 taonina, 1 tonin'ny solika - 25.000 roubles, 1 tonin'ny entona - 25.000 roubles, 2 taonina arina - 2000 roubles. Hisy afo mirehitra mandritra ny dingana. 50000 roubles na 1000 dolara ara-bola isan'olona isan'andro. Rehefa maka ny vidiny dia afaka manisa tombony amin'ny 1 tapitrisa isam-bolana ianao. Tsy tombony akory izany, fa ny zava-misy amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fametrahana dia afaka manadino ny vola lany amin'ny orinasa ary mandoa haingana ny orinasa - izay azo antoka.
Hi, ohatrinona ny herinaratra azonao avy amin'ny tavoahangin'ny tohotra 20 taonina?
Ny tavoahangy kesika 1 taonina dia afaka manome entona entona ho an'ny mpamorona 20 kW ao anatin'ny 24 ora. Tahaka ny tamin'ny ohatra teo aloha, rehefa manamboatra dite 5 taonina, dia afaka manome ny entana 100 kW ny enta-mavesatra tsy tapaka. Hanome ny latabatry ny famokarana angovo avy amin'ny fitaovana samihafa aho.
Ny fivoahan'ny entona dia m.cub. avy amin'ny tavoahangy 1 taonina
Dude cow 39-51
Dung miharo mololo 70
Pig maniry 51-87
Fisompirana vorona 46-93
Fandaniam-poana avy amin'ny hena 240-510
fako an-trano mafy 180-200
Faeces sy ny wastewater 70
Taorian'ny alkaola 45-95
Fandaniana biolojika amin'ny famokarana siramamy 115
Potato tops 280-490
Tsaramaso mena 29-41
Rantsana rongony 75-200
Vokatry ny legioma 330-500
Fialana amin'ny fizotran'ny fanangom-bokatra 165
Rongony sy kofehy 360
Lafarina, mofo 539
Fandroana ny trondro 300
Fampitahana ara-toekarena ny vidin'ny famokarana herinaratra amin'ny orinasa mpamokatra diplaoma miasa amin'ny solika sy ny entona mpamokatra solika avy amin'ny fako mahery.
Ny vidin'ny 1 kW ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny solika solika
Ny vidin'ny 1 kW ho an'ny tobin-tsolika dizilay amin'ny entona mpamokatra entona avy amin'ny fako mahery
Ny vidin'ny gazy solika dia 30 rubles / litatra Ny fandaniana amin'ny hazo dia mahatratra 0,14 roubles / kg Ny vidin'ny fako ao an-tokantrano matanjaka dia 0,14 roubles / kg
Ny famokarana herinaratra solika ho 1 kWh dia 0,234 litatra Ny fampiasana solika matanjaka ho 1 kW ny herinaratra dia 0,7 kg Ny fampiasana solika matanjaka ho 1 kW ny herinaratra dia 1.1 kg
1 kWh mandoa 7.00 rubles 1 kWh mandany 0,10 tapitrisa 1 kWh mandoa 0.16 roubles
Ry Igor G .. Faly aho hamerina hijery ny fanampiny, dia jereo izany ho toy ny anankiray, fa lehibe (tsy anareo) hantsana lalina manjaka dia ny vokatry ny pyrolysis zavamaniry dia tsy ampy ny mpanjifa izay manan-danja manokana ho miteny ny fanjakana na ny fahafahana misafidy. Amin'ny fomba fanao izao tontolo izao, dia misy ohatra iray izay misy ny lalana, ny filohan'ny fitondrana US dia voatery mampiasa taratasy ihany no vokatra avy amin'ny fitaovana amboarina. Toy izany koa, ohatra, ny Antenimiera mpanao lalana no manery ny lapan'ny tanana ihany no mampiasa solika vita amin'ny fandaniam-poana, NEFA! Lenin dia tsy very maina antsoina hoe katsentsitra imperialisma, mihalevona ... Ary ankehitriny, na dia misy solombavambahoaka izay manangana ny olana amin'ny fomba fijery teo aloha, ny diloilo olombitsy misy foana ny kolikoly Sachs na fanapahan-kevitra ary aza mamela izany hevitra tanteraka !!!!!
KB Klimov, amin'ny lafiny rehetra, dia tsy mihevitra ny asany ho toy ny asa amin'ny famerenam-bidy manerantany ny toekarena. Ho sambatra aho raha miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovantsika, misy olona hanatsara ny toe-bolany ary ho lasa matanjaka ara-toekarena. Tena mampiaiky ahy ny fahatsapan'ny Litoanina momba ny fahazavana, amin'ny fampiharana nataon'ilay mpamboly avy any Litoania: "Kominisma amin'ny orinasa tokana." Eo amin'ny voninahiny no antsoina hoe "FERMER".
Salama tsara, raha manamboatra fitaovam-pako ho 5 santimetatra ny shredder, hatraiza no hiditra ao an-tsokosoko (midika hoe firy ny sambo hazo sasantsasany mila voatery hameno ny fihodinana).
Ny horonam-pyrolysis reactor 1 cu. fototra fampisehoana tsy miankina amin'ny horonam-reactor (a mitsangana avalin'izy), indrindra eo amin'ny mari-pana fahana napetraka hafainganam-pandeha (dia ny hakitroky ny manta fitaovana, ny mafana conductivity, ny mari-pana sy ny fananana simba). Koa satria ny dingan'ny hiova finoana akora dia mitohy sy mandeha ho azy mihitsy no mamaritra fametrahana ny famatsiana vola ny manta fitaovana, fotoana sy ny fomba mba hampidiran'izy sy notaterina ho afaka amin'ny reactor. manta reactor replenishment mitranga ho azy tsy misy olona mpandraharaha ihany no mpanaramaso ary tsy maintsy handray fepetra ny mini-fototra dia omena amin'ny akora ho an'ny fanodinana, manta zavatra anatrehan'ny Sela Mpandray Hafanana "hitsoka ny fanairana" raha ny haavon'ny ao amin'ny Hopper ny torotoro fo manta zavatra tsy ilaina. Izany dia hita ho toy ny mandeha ho azy fototra nanomboka famantarana kontolnogo fotoana nandritra ny ora raha tsy mamenoa fahana Hopper, anisan'izany ny fomba nijanona dingana. Izany no miantoka ny kalitaon'ny masontsivana fahamarinan-toerana ny vokatra farany, ny fitohizan'ny ny dingana, ny ambony indrindra ara-nofo manta tahan'ny fanodinana dingana tsy sorona ny hatsaran'ny ny ara-barotra fivoahan'ny vokatra. Raha ny mpandraharaha tsy mandray misy asa vahoaka mba hameno ny Hopper amin'ny torotoro fo akora, orinasa automatique, handeha eny nijanona ny dingana sy mamokatra ny malamalama hafanan'ny marary mitsika eo amin'ny reactor ary hampitsahatra ny fandidiana ny zavamaniry. Fikarakarana ny akora mijanona, mandra-faneva dia nandray, fa ny manta ara-nofo Hopper vao feno, ary ny fototra mihitsy, dia nalefan 'ny tenany ao amin'ny fivoahana fomba ny fandraisana fomba ary mbola fandraisana akora, mandra-pahatongany ho indray dia tsy hifarana na ny fandidiana ny zavamaniry mpandraharaha prinunuditelno ekipa dia tsy hijanona. Automatic fototra ihany koa Manomboka ny dingan'ny nijanona ny dingana raha misy ara-dalana, na rehefa misy ny mety hanome ny fiarovana fanarahan-dalana dingana teknolojika na ny hatsaran'ny vokatra farany.
Tena mahaliana ny fitaovana. Saingy misy fanontaniana iray tena manan-danja: misy fanehoan-kevitra tsara ve momba ny manam-pahaizana manokana ara-tontolo iainana momba izany? Raha tsy misy izany dia saika tsy azo atao ny mametraka lalana ho an'ny fanodinana fako mafy.
Ireto mari-pamantarana manaraka ireto dia mifandray amin'ny antontan-taratasy fototra (pasipaoro, manual):
- Fanambarana ho an'ny firafitry ny fikambanana;
- Ny taratasy fangatahana ho an'ny fikambanana ho an'ny karazana vokatra;
- Fanamarinana ara-tontolo iainana momba ny fanarahan-dalana ny pyrolysis unit "PROMETHEUS", "PROMETHEUS-FARMER".
Ny famolavolana pyrolysis ao amin'ilay orinasa dia manana rafitra fantsom-panafody mba hametrahana ny tsiranoka vovo-gas, ity rafitra notsapihina tamin'ny prototype ity dia tsy nahatonga ny tsy fahombiazana sy ny fivoahana ny pyrolysis ao amin'ny tontolo iainana. Inona no mahatonga ny zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER" iray amin'ireo zavamaniry manintona tontolo iainana manerana izao tontolo izao.
Azafady, azafady, hoe inona ny karazana loza ateraky ny fitaovana ilaintsika?
IV ny kilasin'ny IV.
Ohatrinona ny famokarana minibus manome araka izay tratra amin'ny hafanana? Afaka mahazo bebe kokoa ve aho?
Efa nanamarika aho hoe: "Manomboka amin'ny 250 kW ny herinaratra, izay manome efitra malalaka iray amin'ny 2000 metatra". Ny karajia dia natao ho an'ny efitrano famokarana amin'ny efitry ny hafanana 20 degre ambanin'ny fivoahana dimy andro -40 degre ivelan'ny efitrano. Ambony indrindra raha manova ny rano amin'ny 400 kW. Ankoatr'izany: satria ny loharano lehibe amin'ny fitambaran'ny vovo-dite-gas dia mandeha amin'ny alalan'ny fantsona iray hafa ary entina amin'ny rivotra marevaka mba hahazoana solika sy varo-maitso. Rehefa nanova ny rafitra fanadiovana ny rafitra fitsangatsanganana, dia 100 kW hafa no azo. Noho izany, 500 kW.
Ny fanontaniana momba ny fanadiovana fanadiovana ny entona. Mba hahazoana solika ho an'ny karazana safidy bebe kokoa ve?
Rehefa mivoaka ny ranom-pahazotoana sy solika avy amin'ny pyrolysis ny rano, noho ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny rafitra ara-morpholojika, ny vokatra ara-barotra dia tsy mazava tsara foana. Afaka manana jiro mavo, mena, kafe, tebiteby. Mba hanomezana solika na hamerenana tendro sy fangaraharana, dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny fananganana safidy mandidy.
Lisitr'ireo rafitra teknolojika mba hahazoana solika avo lenta >>VAKIO<<